သကျတနျ့ခြို: January 2013
Doctor-Patient Relationship (သို့မဟုတ် ) ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ပထမဆုံးဝန်ခံချင်တာက ဒီဆောင်းပါးကိုလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကင်းကင်း နဲ့ ကိုယ့်အမြင်အတိုင်းရေးထာတးယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဒီခေါင်းစဉ်လေးတပ်လိုကရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဆရာဝန်တွေနဲ့လူနာတွေပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် Discussion လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ရယ် တချို့သော ဖုံးကွယ်နေတဲ့အမှန်တရားအချို့ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်ဖြစ်တယ် ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်အမြင်ရိုးရိုးကလေးပြောရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဆိုတာ နတ်ဘုရားမဟုတ်ဘူး အလုံးစုံပြည့်ဝတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး ။ ဆရာဝန်မှမဟုတ်ဘူး ဘယ်လို Professional မှာဖြစ်ဖြစ် Perfect ဆိုတဲ့စကားလုံးက အပေါ်ယံသာခြုံလွှမ်းထားခြင်းဖြစ်တယ် ။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ Perfect မဖြစ်ပါဘူး ။ အခုရေးနေတဲ့စာရေးသူအပါအ၀င်ပေါ ။ ဒါလေး အရင်ပြောချင်တာပေါ ။ ဘာလို့ ဆရာဝန်တွေအကြောင်းရေးချင်တာလို့မေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ်တော့ နည်းနည်းဖြေချင်ပါသေးတယ် ။ စိတ်ဝင်စားလို့ရယ် ဆရာဝန်ဆိုတာလည်း သာမန် လူနာတွေလိုပဲ အတွေးတွေခံစားချက်တွေ ရှိနေတဲ့ လောဘဒေါသ မကင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြချင်တာရယ် ဆရာဝန်ကလည်း သူများတွေလိုပဲ အဆိုးရောအကောင်းရော ဒွန်တွဲနေတဲ့ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဆောင်းပါးလေးကဖော်ညွှန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဆရာဝန်တွေဟာ Ideal တွေလား
အဲဒီမေးခွန်းတစ်ခုမေးစရာရှိတယ် ။ တချို့ကတော့ (ဆရာဝန်တွေ ) မိမိတို့ဟာ Professional တွေဖြစ်တယ် ဒီတော့ အားလုံးထဲမှာ စံပြနေရမယ် လို့ဆိုကြတယ် ။ လူနာတွေကို အရက်မသောက်ရဘူးပြောတယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမသောက်ရဘူးလို့တားမြစ်ကြတယ် ။ လူနာတွေကို ဆေးလိပ်မသောက်ရဘူးလို့တားမြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတားမြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး ။ ဆရာဝန်တွေလည်းလူပါပဲ ဆေးလိပ်သောက်ချင်သောက်မယ် အရက်သောက်ချင်သောက်မယ် မကောင်းတာကို မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောခွင့်ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အများစုထင်ထားကြတာက လူနာတွေကိုတောင်တားမြစ်နေတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စံပြအနေနဲ့ မကောင်းတာတွေမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုကြတယ် ။ ဒါဆိုရင် ဆရာဝန်တွေဟာ Ideal တွေလား ။ မဟုတ်သေးပါဘူး ဆရာဝန်တွေလည်း မကောင်းတာ လုပ်တဲ့သူတွေရှိသလိုကောင်းတာလုပ်တဲ့သူလည်းရှိကြတယ် ။ တချို့ဆရာဝန်တွေ ဆေးလိပ်အရက်သောက်ကြတယ် တချို့ဆရာဝန်တွေ ဆေးလိပ်အရက်မသောက်ကြဘူး ။ ဒီတော့ပြောချင်တာက ဆရာဝန်တွေမှာလည်း တသီးပုဂ္ဂလခံစားချက် ရှိကြတယ် ။ ကောင်းအောင်နေရမယ် တော်အောင်နေရမယ် စံပြဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ ဘောင်ထဲ နေနေကြတဲ့ဘ၀တွေ ဟာ တကယ်တော့ လွတ်လပ်ခွင့်အများကြီးကိုဆုံးရှုံးပြီး ဆရာဝန်လုပ်ချင်စိတ်ကို တခါတခါ ဖယ်ခွသွားချင်စိတ်ပေါက်စေမိတယ် လို့ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်တစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် ။ ။ ဆရာဝန်ပဲလုပ်ပေါ့ ဒါလေးတောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားမေးစရာရှိတယ် ။
ဆေးလိပ်အရက်က ကောင်းမှမကောင်းတာ ဒီလောက် Health Education တွေလုပ်နေပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘာလို့ အဲဒါတွေကိုလုပ်ပြနေမှာလဲ ။ အဲဒီလိုမေးခွန်းမေးတဲ့သူဟာ တကယ်တော့ ဆရာဝန်တွေကို Ideal အဖြစ်မြင်နေတဲ့သူပါပဲ ။
ဆရာဝန်တွေ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရမယ်လို့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ဆရာကြီးတွေက မှာလေ့ရှိကြတယ် ။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ် ။ လူနာကုတာပဲ လူနာစိတ်ချမ်းသာအောင် နည်းနည်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးတော့ဝတ်ရမှာပေါ့ ။ လူနာတွေစိတ်ထဲက ဘာလို့ ဆရာဝန်တွေဆီလာပြရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ကောင်းတယ်။ ရောဂါပျောက်ချင်လို့ယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ် ။ ဟုတ်တယ် သူများနိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါပျောက်ချင်လို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အားကိုးတယ်ဆိုတာ ပါပါတယ် ။ ဒီတော့အားကိုးတယ်ဆိုကတည်းက ကြည်ညိုလို့ ဒါဆို ဆရာဝန်တွေအားလုံးကြည်ညိုထိုက်တဲ့လူတွေလား ။ ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဆရာဝန်တွေကို လူနာတွေက ပိုက်ဆံပေးတယ်စပ်းသပ်ခကုသခပေးတယ် ဆရာဝန်တွေကကုတယ် တကယ်ဆို ဈေးသမားစကားနဲ့ပြောရင် အပေးအယူပဲမဟုတ်ဘူးလာ ။ ဘာကြည်ညိုစရာလိုလို့လဲ ။ ဒါပေမယ့်ဘာလို့ ဆရာဝန်တွေကို လူနာတွေက ကြည်ညိုကြလဲ လူ့အသက်ကို ကယ်ပေးတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလို့ပဲ ။ ဒါဆို မွန်မြတ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မွန်မြတ်တဲ့ အသွင်အပြင်ရှိဖို့တော့လိုတယ် ။ အခုခေတ်ဆေးကျောင်းသားဆေးကျောင်းသူလေးတွေကိုလည်း နည်းနည်းပြောချင်သေးတယ် ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်တွေတုန်းက ဂျင်းပန်နဲ့ ဆေးရုံမလာရဘူး လာတယ်ဆိုရင် ဆရာကြီးတွေမတွေ့အောင်ပုန်းနေရတယ် တွေ့တာနဲ့ သေပြီမှတ် လူနာကိုမစမ်းခိုင်းဘူး ဆေးရုံအပြင်ထွက်ခိုင်းတယ် ။
အခုခေတ်တော့ ဆေးရုံမှာ ဂျင်းပန် အပေါ်ကနေဂျူတီကုတ်ထပ်ဝတ် ပြီးတော့ နားကြပ်ကလေးနဲ့ကြော့ကြော့ မော့မော့ဆရာဝန်ကလေးတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့ရပြီ ။ ဒါကြောင့်ဆေးကျောင်းသူဆေးကျောင်းသား တွေကိုလည်း ဒီဆောင်းပါးနေကမှာချင်တာက ဂျူတီကုတ်နဲ့နားကြပ်ပါတိုင်းဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူး လူနာရဲ့အသက်ကို ကိုယ့်အသက်လို သဘောထားပြီးစေတနာ ထားကုနိုင်တဲ့ သပ်ရပ်ကြည်ညိုအားကိုးလောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အ၀တ်အစား ( စတိုင်ပန်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းစတိုင်ပန် ပုဆိုးဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပုဆိုး စသဖြင့် ) ၀တ်ဆင်ကြဖို့လိုပါတယ် ။ နားကွင်းတွေနားပေါက်တွေ နဲ့ကလည်း ဆရာဝန်တွေနဲ့သိပ်တော့အံမကျလှဘူး ။ အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမှမဟုတ်တာ လူနာအသက်ကိုကယ်ရမှာပဲ ဒါတွေက လူနာကုတဲ့ professional field ကို မထိခိုက်စေပေမယ့် အကြည်အညိုနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ပျောက်စေတာအမှန်ပဲ ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်အသက်ကို နားကပ်တစ်ဖက်တပ်ပြီးဂျင်းပန်ဝတ်ထားတဲ့ MP3 သီးချင်းနားထောင်ပြီး ဆေးရုံကော်ရစ်တာပေါ်ရပ်နေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်လက်ထဲ မထိုးအပ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီလို အသေးအဖွဲလေးတွေကို ဆရာဝန်တွေ အားလုံးပြင်ဖို့လိုကြပါပြီ ။ တကယ့်ကို သပ်ရပ်စွာ ၀တ်ဆင်တဲ့ဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိသလို မသပ်မရပ် ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ လမ်းသရဲစတိုင် ဆရာဝန်တွေလည်းမြင်နေရသေးတယ် ။
နိုင်ငံခြားအကြောင်းကိုအရင်စပြောရမယ်ထင်တယ် ။ နိုင်ငံခြားမှာ Consultation fees ယူတယ် လူနာကိုဆေးပေးတယ် follow up ချိန်းလိုက်တယ် ။ လူနာပြန်လာတယ် ပြန်စစ်တယ် ကြားထဲမှာ တစ်ခုခုလွဲချောခဲ့ရင်လူနာက ဆရာဝန်ကို တရားစွဲတယ် ။ ဆရာဝန်သည် လူနာတရားခွဲရင် ခံရတယ် ။ လူနာက ဆေးမထိုးချင်ဘူး ဆိုရင်ထိုးခွင့်မရှိဘူး ။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့အေးစက်စက် ရောင်းသူဝယ်သူဆက်ဆံရေးပဲ ။ သူတို့အဆိုအရတော့ Professional Communication ဆိုလားပဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ။ ဆရာဝန်ကို အိမ်ဦးနတ်အဖြစ်မှတ်ယူတဲ့လူနာတွေတောင်ရှိတယ် ။ ဒါက ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးလို့ရေးပြတာပါ ။ ဆရာဝန်လာပြီဆိုရင် တကယ့်ကို ခယယိုကျိုးလို့ ယပ်ခပ်ပေးသူကခပ် ရေတိုက်တဲ့သူကတိုက် နီးနီးနားနားတောင်လမ်းမလျှောက်ခိုင်းဘူး ။ ကောင်းလိုက်တာ ဆရာဝန်နဲ့လူနာဆက်ဆံရေးဟာ မောင်နဲ့နှမ ၊ သားနဲ့အမိ ၊ အဒေါ်နဲ့တူ အဖေနဲ့သားလိုဖြစ်နေခဲ့တာ ။ အခုအချိန်ထိလည်းအများစုက အဲဒီဆက်ဆံရေးပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံကနေ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ကနေစလို့ မီဒီယာတွေအားကောင်းမှု လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တွေအားကောင်းမှု နဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်သွားပြီး ဆရာဝန် လူနာဆက်ဆံရေးဟာ မြောင်းထဲကျသွားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေလိုဖြစ်သွားရပြန်တယ် ။ လူပါပဲ ဆရာဝန်ကလည်းလူပါ လူနာ ၁၀၀ လောက်ကုရတယ် အချိန်သိပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ အထူးကုကြီးတွေလူနာများတဲ့ဂျီပီတွေပြောကြတယ် ။
ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူး လူနာတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် လူနာတွေကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးရမယ် ပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ် ။ လူနာအများစုက ကိုယ့်မှာ ဘာဖြစ်ချင်သလဲသိချင်ကြတယ် ဆရာဝန်တွေကလည်း တချို့ရောဂါတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြရင်နားမလည်မှာစိုးတာရယ် (သို့မဟုတ် ) မရှင်းပြချင်တာရယ် ၊ နောက်လူနာတွေ စောင့်နေရမှာအားနာတာရယ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ Diagnosis ကိုမပြောပြလိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှိတယ် ။ ပြောပြတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ် ။ အခုလို (မရှိဘူးရှိတယ် ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတွဲတွဲရေးနေရတာ လူတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေဟာလည်းအကောင်းရောအဆိုးရောဒွန်တွဲနေကြတယ်ဆိုတာထင်ဟပ်ပြချင်တာပါ ) ။ ဘာပဲပြောပြော ဆရာဝန်လူနာဆက်ဆံရေးဟာ အခုနောက်ပိုင်း ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေတာ အမှန်ပဲ ။ ဘတ်လဘိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာ ဘမ်းစကားပါ မရှင်းမရှင်းပဲ ဇာတ်မျောကြီးဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတာပါ ။ လူနာတွေက ဆရာဝန်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား မှားတာနဲ့ တရားစွဲဖို့လောက်အထိ ဖြစ်ကြပြီလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူး ။ အခုထိ ဆရာဝန်ကို ယုံကြည်အားကိုးနေကြတဲ့ လူတွေဒုနဲ့ဒေး။ ဒါဆို ဆရာဝန်လူနာဆက်ဆံရေးက အလုံးစုံပျက်ဆီးသွားပြီလားလို့ မေးစရာရှိတယ် ။ မပျက်ဆီးသေးပါဘူး ။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ လူနာတွေ ယုံကြည်အားကိုးထိုက်အောင်နေနေသမျှ လူနာတွေဖက်က အားကိုးစိတ် ယုံကြည်ချင်စိတ်ကလည်းမပျက်သေးဘူးဆိုတာ ပြောချင်တာပါ ။
ဆရာဝန်တွေ အမှားပေါင်းများစွာ မလုပ်မိကြဖို့လိုတယ်
အသိဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိတယ် အခုတော့ဆရာဝန်မလုပ်တော့ဘူး ။ စီးပွားရေးလုပ်နေတယ် ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာလိုက်တာ ကျိကျိတက်ပဲ တခါတခါ သူများချမ်းသာတာ အားကျတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲလည်းသူ့ဖက်နေကြည့်တာ ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာ တစ်ခုခုကိုဆုံးရှုံးနေရသလိုပဲအချိန်နဲ့အမျှပေါ့ ။ သူ့ဖြစ်စဉ်ကဒီလို လူနာတစ်ယောက် လာပြတယ် သူကဆေးရုံတက်ဖို့လိုအပ်လို့ဆေးရုံသွားရမယ်ပြောတယ် လူနာကငြင်းတယ်ဆရာ့လက်ထဲအသေခံမယ်တဲ့ ဒီတော့ သူကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆေးရုံသွားပါအချိန်မှီပါတယ် ဒီမှာဆက်နေရင်အချိန်မမှီဘူးပြောတယ် ဆရာ့လက်ကိုပဲအပ်ပါတယ်ဆရာပဲကုပေးပါဆိုပြီးဇွတ်ပြောကြတယ် ။ အဲဒီအချိန်က တကယ့်ကို Crisis ပါ ဆရာဝန်က လူနာကို ကျွန်တော်မကုနိုင်ဘူးငြင်းခွင့်မရှိဘူး နိုင်ငံခြားမှာတော့ငြင်းချင်ငြင်းမှာပေါ့ ။ အပြင်ဆေးခန်းမှာ ဆက်ကုပြန်ရင်လည်း လူနာအသက်သေနိုင်တယ် ။ နောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံး သူအသက်ကယ်ဆေးတွေထိုးတယ် သူ့ အတွေ့အကြုံ သူ့ အစွမ်းရှိသလောက်နေ့နေ့ညညသူကုတယ် ။ ၃ ရက်လောက်ကြာတော့ လူနာ ဆုံးသွားတယ် ။ လူနာရှင်တွေကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ပဲ ဆရာရှိလို့ ဒီလော
က်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာလို့ပြောတယ် ။ အဲ ၀ိုင်းဖွကြတာက ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ ဒီဆရာဝန်ဆေးထိုးလို့လူနာ သေသွားတာပါဆိုပြီး ။ တစ်ယောက်စကားတစ်ယောက်နားနဲ့ စကားတွေကားလိုက်ကြတာ သူ ဆေးဆက်မကုတော့ဘူး ။ စီးပွားရေးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး နားကြပ်ကိုချ စီးပွားရေးလောကထဲ ၀င်သွားတယ် ။
အမှားပေါင်းများစွာ လုပ်မိနိုင်ပါတယ် ။ လူပါဆိုမှပဲ ဒါပေမယ့် အမှားနည်းသထက်နည်းအောင်တော့လုပ်ရမယ် ။ အထူးသဖြင့်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရတဲ့ သနားဖို့ကောင်းတဲ့လူနာတွေအဖို့ ကိုယ်ဟာ အားကိုးထိုက်တဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ လိုတယ် ။ ကျန်တဲ့ဆရာဝန်လူနာ ဆက်ဆံရေးအမှား ဘာအမှားညာအမှားခွင့်လွှတ်လို့ရပေမယ့် ဆေးကုခြင်းအပိုင်း Medical Treatment မှားရင်တော့ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူး ။ ဆရာဝန်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီး ဆမ ပြန်သိမ်းတာတွေရှိပါတယ် ။ ဒီတော့ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း အမြဲ Update ဖြစ်နေအောင် Continuous Medical Education ဆိုတဲ့ CME တွေ တက်ကြဖို့လိုတယ် ။ လူနာတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နွေးနွေးထွေးထွေးနေရမယ် အေးတိအေးစက်မလုပ်ရဘူး ဒါဆို အမြဲပဲ မိသားစု ဆက်ဆံရေးကိုရမှာပါ ။ လူနာထက်ပိုက်ဆံကိုပဲ ပို မြတ်နိုးသော ဆရာဝန်တွေရှိသလို တကယ်တော့ ကိုယ့်အကျိုးကို လစ်လျှုရှုပြီး နယ်မှာ အပင်ပန်းခံသွားကုနေတဲ့ စေတနာ နှလုံးလှဆရာဝန်တွေလည်းရှိကြတယ် ။
အဲဒီကိစ္စကလည်းရှင်းရအတော်ခက်တယ် ။ ဆရာဝန်တွေ တချို့မာန်တက်ကြတယ် တချို့မာန်မာနမရှိကြဘူး ။ ပညာတတ်တဲ့ အထူအပါးပေါ်မူမတည်ဘူး ။ ဆေးလောကစ၀င်လာတဲ့ဟောက်ဆာဂျင်တစ်ယောက်ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက် မောက်မောက်မာမာနဲ့လူနာတွေကိုဆက်ဆံပြီး မာန်တက်နေတာရှိသလို ဘွဲတွေတသီကြီးယူပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေက လူနာတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းရှိတာပါပဲ ။ တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ အကြောင်းအရာတွေက ဆရာဝန် နဲ့လူနာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူး ။ လူ သားတွေဆိုတဲ့လူအချင်းချင်းဖြစ်နေကြတာတွေပါ ။ မာန်တက်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှိသလို မာန်မတက်တဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိကြတယ် ။ မာန်တက်တဲ့လူနာတွေရှိသလို မာန်မတက်တဲ့လူနာတွေလည်းရှိကြတယ် ။ ဒါပေမယ့်လူနာတွေ ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ထိုက်ဖို့အတွက်တော့ မာန်မနာကိုခွာချထားတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြဖို့လိုပါတယ် ။ တချို့ဆရာဝန်တွေဟာတကယ့်ကို စိတ်ရင်းသဘောကောင်းကြတယ် ။ လူနာတွေလာပြီဆိုရင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စမ်းသပ်ကြသလို ဘယ်လိုမာန်မာနမှမရှိပဲ လူနာတွေကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြတတ်ကြတယ် ။ တချို့ဆရာဝန်တွေ တကယ့်ကို မာန်တက်ကြတယ် ။ လူနာကို ရှင်းပြဖို့မထိုက်တန်ဘူး ဆေးပညာတွေနားမလည်ပဲဘာလို့မေးနေတာလဲ လို့ တွေးကြတယ် ။ မှန်ပါတယ်လူနာတွေကဆေးပညာနားမလည်ဘူးပဲထားပါ ဒါပေမယ့် ဘာရောဂါဖြစ်နေလို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ် ဘာကြောင့်ဒီလက္ခဏာဖြစ်နေတာပါ ဆိုပြီးအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့ထင်မိတယ် ။ အဲဒီလိုဆရာဝန်တွေ အမှန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူနာတွေကတော့ သိချင်ကြမှာ မလွဲပါဘူး ။
တခါတခါ တချို့အကြောင်းအရာတွေ ချိန်ဆပြရတာ အရမ်းခက်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူများ သတိထားမိကြမှာပါ။ အမှန်တော့ Refer fees ဆိုတာ မဖြစ်စလောက်ငွေကြေးလေးပါ ။ ရာဂဏန်းထောင်ဂဏန်းနဲ့ ဘာမှမစားလောက်ပေမယ့်အဲဒီ ကိစ္စကိုလက်ညှိုးထိုးကြပြီး ဆရာဝန်တွေကို အရှုပ်ထုပ်တွေလို့စွပ်စွဲနေကြသူတွေဖြစ်တယ် ။ ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာဝန်တွေကိုပဲပြောရပါဦးမယ် ။ လိုအပ်တဲ့ Investigation ကိုပဲလုပ်ခိုင်းပါ လူနာအများစုက ဆင်းရဲကြပါတယ် ။ ကျွန်တော့်ဆရာ (မြောက်ဥက္ကလာပ မှ သမားတော်ကြီး ) တစ်ယောက်ပြောသလို “ လူနာတစ်ယောက်ကို creatinine စစ်ဖို့မလိုပဲ ဘာလို့စစ်ခိုင်းတာလဲ ” ဆိုသလိုပေါ့ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ကစာသင်သားတွေပါ ။ Durg bruden တို့လို မျိုး Investigation burden လည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူး ။ လိုအပ်တာကိုပဲတိတိကျကျစစ်ခိုင်းပြီး ဆေးဝါးတိတိကျကျပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်များကို အတုယူကြစေချင်တယ် ။ ပထမတစ်ခေါက်ကရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးထဲက လို့ ဖြစ်နိုင်ရင် နာမည်ကြီးရာ ဆေးဝါးတံဆိပ်တွေ ရွေးပေးတာမဟုတ်ပဲ လူနာတွေအတွက် တကယ်ပဲ အရည်အသွေးးပြည့်ဝတဲ့ ဆေးဝါးတွေရစေချင်လို့ ညွှန်းပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝန်များဖြစ်ကြပါစေ ။ နောက်တစ်ခု Deal တွေကိုလည်း ရည်ရွယ်ချက် ၂ခုနဲ့တွေ့ရတယ် ။ မှန်ပါတယ် ward ထဲကလူနာတွေအတွက် donation လိုလို့ ဆေးရုံ facility အတွက် လိုလို deal လုပ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံပါတယ် လူနာတွေအတွက်အများအကျိုးတွက်ပဲလေ ။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ Personal advantage အတွက်ဆိုရင်တော့ရှောင်ကြစေချင်ပါတယ် ။
အခု ၀ိုင်းထိုးနေတာ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းတည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ လက်ညှိုးပေါင်းများစွာကပါ ။ ကိုယ်တွေမှ မပြင်ရင် ကိုယ်တွေမှ အချင်းချင်းသတိမပေးရင် ဒီအတိုင်းပဲ အရှုပ်ဇာတ်လမ်းတွေမှာ မျောပါနေကြမလား ။ ဆရာဝန်ကြီးတွေကို စော်ကားလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လား အမှန်ကိုမြင်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လားဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူတွေနားလည်ကြမှာပါ ။ ဆေးလောကကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီမြင့်မားစေချင်ပေမယ့် Doctor -patient relationship ကိုတော့ အရင်ခေတ်က “ မိသားစု ” ဆက်ဆံရေးကိုပဲ လိုချင်မိပါတယ် ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ တကယ်တော့ “ သမား ” တွေပါ ။ သမား ဂုဏ်နဲ့ညီအောင်နေမှဖြစ်မယ်လို့ ဆရာကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ခဏခဏပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ လူနာကို အသက်ကယ်ယုံတင်မဟုတ်ဘူး အဲဒီလူနာရဲ့ “ ရေရှည်အကျိုး ”အတွက်ပါ မျှော်တွေးဆပြီး Plan လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ ။ ရပ်ကွက်ထဲ ဆေးထိုးမှားလို့ ဆမ အသိမ်းခံလိုက်ရတယ် တောကိုပြေးပြီးပြောင်းသွားတယ် အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်စတဲ့ အသံတွေကို လူထုတွေထဲကနေ ပြန်မကြားချင်တာအမှန်ပါ ။ လူနာတွေမှာလည်းအကောင်းအဆိုးရှိနေကြသလို ဆရာဝန်တွေကို နားမလည်ကြသလို ဆရာဝန်တွေမှာလည်းအကောင်းအဆိုးရှိကြပြီးလူနာတွေကိုနားမလည်ကြတာတွေရှိတယ် ။
ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေတဲ့ ဒီဇတ်လမ်းကြီးတော့ ဘယ်အချိန်အဆုံးသတ်မလဲ ။ လူနာပေါင်းများစွာ အတွက်လိုအပ်နေလို့လစ်ဟာနေတဲ့ လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူးပေါင်းများစွာကို အစိုးရကမပေးနိုင်လို့ PSC ဖြေခိုင်းတယ် ပြန်လူစစ်တယ် လျော့ချတယ် ။ အရည်အချင်းပြည့်မီလို့ ဘွဲတောင်ပေးဆမလက်မှတ်တောင်ပေးပြီးမှ PSC ကမေးခွန်းတွေမဖြေနိုင်လို့ လက်ထောက်ဆရာဝန်မဖြစ်လိုက်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေထုနဲ့ဒေးပါ ။ ဆရာဝန်တွေများစွာ ကျေးလက်ဒေသ တောင်တန်းဒေသ မြေပြန့်ဒေသတွေမှာ လိုအပ်လျှက်ရှိပါတယ် ။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း နယ်မှာ သွားလုပ်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့လစာနဲ့ အဲဒီဆရာဝန်တွေယူရတဲ့ Risk တွေကို တခါလောက်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်စေချင်တယ် ။ M.Med.Sc ဖြေဖို့မဖြစ်မနေလက်ထောက်ဆရာဝန် ဘ၀ကိုလိုချင်ကြတဲ့ဆရာဝန်အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုတော့ရှာဖွေရလိမ့်မယ်လို့ တင်ပြချင်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ ဆရာဝန်တွေပိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး ။ လူနာပေါင်းများစွာအတွက်လိုတောင်လိုနေပါသေးတယ် ။ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ဆရာဝန်တွေအများကြီးလိုနေပါတယ် ။ အစိုးရအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ မှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ဥပမာ လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံအစိတ်အပိုင်း ၊ စမ်းသပ်မှုစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ FOC ယူနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက်များစဉ်းစားပြီ့းဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင် ခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့ Deal လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်း ကင်းရှင်းသွားမယ်လို့ မြင်မိတယ် ။
အစိုးရကို အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပေမယ့် အားနည်ချက်တွေကတော့ရှိနေတာပါပဲ ။ Ward အတွင်းအပြင် သန့်ရှင်းရေးကအစ ဆေးရုံစင်္ကြန်မှာ ချရောင်းနေတဲ့ဈေးသည်တွေ ကွမ်းတံတွေးတွေ အ၀င်ပေါက်စောင့်တဲ့လူတွေရဲ့ မျက်နှာထားတွေ ၊ နာ့စ်တွေ ဟောက်စ်တွေ ဆရာဝန်တွေအဆုံးကျန်းမာရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ အစိုးရက မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ ဖြစ်သလိုလုပ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ နေရာတွေအများကြီးပါ ။ သေချာတွေးကြည့်ကြစေချင်သည် ။ ဟီးရိုးမဟုတ်ကြသော ဆရာဝန်များနှင့် ဆရာဝန်ကို အသက်ပုံနှင်းအပ်ရသော လူနာများကြားက နားလည်စာနာနွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ကိုသာမြင်တွေ့ချင်နေမိတော့သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:37 PM4comments:
အခုနောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းစာရေးသူတွေစုပြီး စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် မှတ်တိုင်အဖြစ်စိုက်ထူခဲ့ကြတာ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့လို ၀ါသနာရှင် စာရေးသူတွေအတွက် အောင်မြင်မှု တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူပြီး အရမ်းကို ၀မ်းသာမိပါတယ် ။ အခုတလောခပ်စိပ်စိပ်လေး ထွက်ဖြစ်သွားတာက ကိုရန်အောင်စီစဉ်တဲ့ “ သက်တံ့ဆယ်စင်း ” ၊ နောက်ပြီး အိန်ဂျယ်လှိုင်စီစဉ်တဲ့ “ မိုင်တိုင် ၂၀ ” ၊ အခု ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ “ ကြယ်စင် ဆယ့်တစ် ” စသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သလောက်တွေနဲ့ စာပေအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြန့်ကျက်လျှောက်လှမ်းနေကြပါပြီ။
ကြယ်စင်ဆယ့်တစ် ဒီနေ့ ၂၆ . ၁. ၂၀၁၃ မှာ ထွက်ပါပြီ ။ ရှင်မတောင်စာပေမှ တစ်ပြည်လုံးသို့ ဖြန့်ချီနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ရရှိနိုင်သော စာအုပ်ဆိုင်တွေကတော့
- စာပေလောက ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ ၊ ၅ ၊ ၆
- TAB , တော်ဝင်စင်တာ
- Book Corners နှင့်စာအုပ်ဆိုင်များအားလုံး
- ရာပြည့် နှင့် စာအုပ်ဆိုင်များ
Supermarket , Orange , City Mart , United Living Mall စသော နေရာများတွင်လည်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ နယ်များကိုလည်း တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဆရာ နေ၀င်းမြင့်အမှာစာနဲ့အတူ သေသေသပ်သပ်လေး ထွက်ရှိလာတဲ့ ကြယ်စင်ဆယ့်တစ်မှာ လိုအပ်ချက်မှာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် ။ လိုအပ်ချက်များရှိပါက ကျွန်တော်များ၏ လိုအပ်ချက်များသာဖြစ်ပါ၍ ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် :D ကြယ်စင် ဆယ့်တစ်သည် ရသစာစုများ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရှင်မတောင်စာပေ အမှတ် ၂၀၅ , ၅/၆ လွှာ ၊ Health For All Magazine တိုက် ၃၅ လမ်းအထက်ဘလောက် ၊ ဖုန်း ၃၈၆၆၁၇ သို့လည်း ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ် ။
အနုပညာ ရပ်ဝန်းထဲက ကြယ်ကလေးတွေ တစ်ဆယ့်တစ်ပွင့်ပါ . . . အလင်းလက်ဆုံးတွေမဟုတ်ကြပေမယ့် ကမ္ဘာမြေကို အလင်းပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့စေတနာတွေကတော့ ညီတူညီမျှပါပဲ ။ အစစအရာရာ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကို လေးနက်စွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 8:40 PM2comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 4:47 PM7comments:
ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးဖို့စိတ်ကူးထားတာတော့ကြာပါပြီ ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီမနက်ကားပေါ်မှာ Shwe FM ကလာတဲ့ ဒေါက်တာဝင်းမောင်နဲ့ အင်တာဗျူးလေးကိုနားထောင်လိုက်ရတာ ။ သိပ်ကောင်းတာပါပဲ ဆရာ့ကိုချီးကျူးမိသလို မြန်မာပြည်ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အခုလို ပြည်သူတွေ ဆရာဝန်တွေသိအောင် နိုင်ငံခြားကအတွေ့အကြုံလေးတွေမျှဝေပေးတာ ဆရာဝန်တွေအတွက်ပါ များစွာ အကျိုးရှိစေပါတယ် ။ ဆရာပြောသွားတဲ့ နိုင်ငံခြားနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေထဲကကွာခြားချက်တွေ ကိုလည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ များစွာ ဗဟုသုတရသလို မြန်မာပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း များစွာ မြင်မိသွားပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါဆယ် ဆရာဒေါက်တာဝင်းမောင်ခင်ဗျာ ။
အခုရေးလိုတဲ့အကြောင်းကတော့ ဆရာပြောသွားတဲ့ အထဲက ဆေးကုမ္မကြီးများနဲ့ဆရာဝန်ကြီးများအကြောင်းပါပဲ ။ မှန်ပါတယ် ဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုတာက သာမန် MBBS ဘွဲ့လေးပြီးတော့ သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အချိန်တွေအကုန်ခံ ကြိုးစားမှုတွေအကုန်ခံ ငွေတွေအကုန်ခံပြီး သင်ကြရတယ် ။ အဲဒီအထဲမှာ ဆရာပြောသွားသလိုပါပဲ တချို့ သော နာမည်ကြီးဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ တချို့သော ဆေးကုမ္မဏီကြီးတွေရဲ့ Ethic နဲ့မညီတဲ့ကိစ္စလေးတွေ ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါပဲ ဆရာကြီးရေ ။ ဒီမနက်မှာ ဆရာပြောသွားပါတယ် ။
“ ကျွန်တော့်ရဲ့အသိ လူနာတစ်ယောက်က ဒီက အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးခန်းမှာ သွားပြပြီး ကုသနေတယ် အဲဒီတော့ ကျွန်တော်က အဲဒီလူနာကို သတင်းသွားမေးပါတယ် မိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ အဲဒီတော့ လူနာရဲ့မှတ်တမ်းကို ကြည့်လိုက်တာ ဆေး ၁၁ မျိုးပေးထားတာတွေ့ရတယ် ဆရာဝန်ကြီးကလည်း နာမည်တော့မပြောချင်ပါဘူး ဘွဲ့ ၆ ခုတိတိ နိုင်ငံခြားကနေယူထားတဲ့နာမည်ကြီးဆရာဝန်ကြီးပဲ အဲဒီမှာ ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့
- အဲဒီ ဆေး ၁၁ မျိုးကို သောက်ရတာ တစ်ပတ်ကို တစ်သောင်းခွဲလောက်ကျတယ်
- ဆေးနာမည်တွေကို အထဲက Composition , chemical name မရေးထားပဲ Brand Name တွေရေးထားတာတွေ့ရတယ်
ဒီတော့ ကျွန်တော်က အဲဒီဆေး ၁၁ မျိုးကို မလိုတဲ့ဆေးတွေဖြုတ်ကြည့်လိုက်တာ ဆေး ၃ မျိုးပဲကျန်ပါတော့တယ် ကျန်တာတွေက အားဆေးတွေနဲ့မလိုတဲ့ဆေးတွေချည်းပဲ ပိုက်ဆံကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ပတ်ကို ၇၅၀ ကျပ်ပဲကျပါတော့တယ် ကဲ ဒါတွေကမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေပါ ”
မှန်ပါတယ် ။ အခုပထမဆုံးပြောလိုတဲ့ကိစ္စကတော့ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ အထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဓါတုနာမည်ကိုမရေးပဲ ဆေးကုမ္မဏီကထုတ်တဲ့ ဆေးနာမည်တွေရေးနေတဲ့ကိစ္စပါ ဥပမာ တစ်ခုပြောမယ် Paracetamol ကို ညွှန်ချင်ရင် ဆရာဝန်က Paracetamol 500mg လို့ပဲညွှန်ရမယ် အဲဒါကို Ethic နဲ့မညီစွာ ဆေးကုမ္မကြီးတွေရဲကလွှမ်းမိုးမှုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ (တချို့လည်း သိသိသာသာ တချို့လည်းမသိမသာ ) နဲ့ Lensen တို့ Biogesic တို့ စတဲ့ ဆေးနာမည်တွေညွှန်တာတွေ့ရတယ် ။ ဒါတွေဟာတကယ်ပဲ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ Ethic နဲ့ညီရဲ့လားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ ။ မညီပါဘူး ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့တကယ်တော့ ဆေးရဲ့ Chemical name ကိုသာ ညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ ဆေးကုမ္မကြီးတွေရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအလုပ်ကောင်းမှုနဲ့အတူ ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ဆေးကုမ္မဏီအရိပ်လွှမ်းမိုးမှုတွေ ခံနေရတာတကယ်တော့သိပ်ကိုရှက်စရာကောင်းလှပါတယ် ။ အခုလို စကားပြောနေရတာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းနေရသလိုပါပဲ ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆရာဝန်ဖြစ်နေတာနဲ့အညီ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ Ethic နဲ့အညီတော့နေထိုင်ရမယ်မဟုတ်လား ဆရာဝန်ကြီးများခင်ဗျာ ။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဆရာဝန်ပေါက်စန စာရေးဆရာ ပေါက်စနေလေးက ပညာတွေ အများကြီးတတ်ထားတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေအကြောင်းရေးရတာ တကယ်တော့ မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြနေသလိုပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွာ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ထပ်ပြီးပြောရပါဦးမယ် ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဂျီပီလို့ခေါ်တဲ့အထွေထွေ ရောဂါကုဆရာဝန်တွေအကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ များသောအားဖြင့်အထွေထွေကုတွေဆိုတာ လူနာများစွာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နီးတူ လူနာတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနီးနီးကပ်ကပ်နေကြတာများပါတယ် ။ ပြီးတော့ ဆေးကိုလည်း ညွှန်ကြတာထက် တစ်ခါတည်းပဲ ဘယ်နှစ်ရက်စာဆိုပြီးပေးလိုက်ကြတာများပါတယ် ။ ဒီတော့ အခု Highlight လုပ်ပြလိုတာက အချို့သော ဆရာဝန်မပီသတဲ့အထူးကုနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေက ဆေးကုမ္မဏီကြီးဆီက ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ယူပြီး ဒီဆေးကိုပဲ ဘယ်နှစ်လညွှန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကတိစကားတွေ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ စသဖြင့် ဆေးကုမ္မဏီကြီးတွေရဲ့မက်လုံးတွေအောက်မှာ ချယ်လှယ်မှုတွေအောက်မှာ ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ဘ၀ဟာ တကယ့်ကို တွေးကြည့်ရင်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလှပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်းဘွဲ့ယူစဉ်က ရွတ်ခဲ့တဲ့ ကတိစကားတွေ ဆရာကြီးတွေမှတ်မိပါသေးရဲ့လားမသိ ။ ဘယ်လို လာဘ်ထိုးမှုမျိုးကိုမှ မယူပဲ လူနာအကျိုးကိုပဲကြည့်လို့ လူနာရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပဲ ရှေးရှုသွားပါမယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးပါတယ်ဆိုတာ ဆရာကြီးတို့စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ။ အခုတော့ ဆေးလောကထဲမှာနေနေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ မကြားချင်မှ အဆုံး အထူးကုသော ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို မျက်မြင်နဲ့ဖြစ်စေ အကြားနဲ့ဖြစ်စေ ကြားနေသိနေရပါတယ် ။
တစ်ယောက်သော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးကတော့ ဘယ်လောက်များ ခမ်းနားသလဲဆိုရင်ဖြင့် တက်လိုက်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ သူ့ အပေါင်းအပါတွေ နဲ့သူ့ အတွက်ကို တစ်ဝိုင်းသက်သက် Reserve လုပ်ပေးရပါသတဲ့ ။ ကျွန်တော်ကတော့မယုံမိပါဘူး အဲဒီဆရာဝန်ကြီး ကျွန်တော်လေးစားအတုယူနေတဲ့ဆရာကြီးလေ ။ ဒီလိုနဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဆုံမိပါလေရော ဟုတ်သမှ ဟုတ်ပါပဲ သူ့အတွက် တစ်ဝိုင်းစီစဉ်ပေးထားရတဲ့အပြင် မော်ဒယ်ဂဲလိုလို ဆေးကုမ္မဏီက ကောင်မလေးတွေက အနီးအနားမှာ ၀ိုင်းလို့ ။ အော်. . .ဆရာဝန်ဆိုတာ ဒါလားလို့ တခြားသူတွေ တွေးမိကြရင်ဖြင့်ရင်ကျိုးလှချည်ရဲ့လို့ ကျွန်တော်တွေးမိပါသေးတးယ် ။ ကြုံတုန်းလေး MMA အကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်ပါဦးမယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က MMA မှာ ( MMA ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးပါ အဲဒီမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာ Topic တွေပြောကြတယ် တင်ပြကြတယ် ဆွေးနွေးကြတယ် တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါ ) မကောင်းတာက ဆေးကုမ္မဏီတွေရဲ့တချို့လုပ်ရပ်တွေပဲ ။ အဲဒီအသင်းကြီးက ဆေးကုမ္မကြီးတွေဆီက အခန်းတစ်ခန်းကိုဘယ်လောက်ယူရမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားသလို Symposium တစ်ခုကိုဘယ်လောက် Lunch ဆိုဘယ်လောက် ကျွန်တော်တို့ အံ့သြရလောက်တဲ့ငွေကြေးတွေ သတ်မှတ်ကောက်ခံပါတယ် ။ ဘယ်မှာ ပြန်သုံးသလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး သိတဲ့သူရှိရင်လည်း မီဒီယာတွေကနေတဆင့်အဲဒီအလှူငွေတွေကို ဘယ်မှာ သုံးတယ်ဆိုတာကို ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းလေးလုပ်ပေးစေချင်တယ် ။
အဲဒီတစ်နှစ်မှာပေါ့ အခန်းတစ်ခန်းမှာ မော်ဒယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက် က စကဒ်အတိုလေးနဲ့ရပ်နေတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဘေးကလူတွေကိုစပ်စုကြည့်တယ် အဲဒါဘာလုပ်တာလဲလို့ပေါ့ ။ မော်ဒယ်ငှားထားတာတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဆေးကုန်သည်တွေ စိတ်ဝင်စားမှုရအောင်လို့တဲ့ အလိုလေးဗျာ ဒါဟာ ကားရောင်းကားဝယ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ရှိုးမှမဟုတ်တာပဲ ။ အဲဒီလို မော်ဒယ်တွေနဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာညီလာခံကြီးနဲ့လားလားမှ မအပ်စပ်ဘူးထင်တာပါပဲ ။ တချို့သောဆရာဝန်ကြီးတွေကြိုက်ကြပေမယ့် တကယ့်ကို Ethic နဲ့အညီနေကြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေက အတော်လေးကိုမျက်နှာပျက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ ထားပါတော့ . . .အခုဆက်ပြောချင်တာ ဆေးကုမ္မဏီကြီးတွေပါ ။
အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကို တင်သွင်းဖြန့်ချီနေတဲ့ဆေးဝါးတွေကို Distributor လုပ်နေတဲ့ ဆေးကုမ္မဏီကြီးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိပါပြီ ။ အကုန်လုံးက အကျိုးအမြတ်အတွက်ဈေးတွေတင်ကြတယ်ဆိုတာ ဆေးကုမ္မဏီကြီးတွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေလိုက်ရမှာပဲသိပါတော့တယ် ။ ကျွန်တော်သိတဲ့ဆေးကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုကတော့ ရုတ်တရက်ကြီး ဆေးတွေကို ဈေးတက်လိုက်တာ ဆရာဝန်တွေတောင်မျက်လုံးပြူးကုန်တယ် ။ အကြောင်းကိုမေးကြည့်တော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ထုတ်လုပ်ရေးစရိတ်တွေတက်လာလို့ပါတဲ့ ။ တကယ်တော့ အဲဒီအကြောင်းပြချက်တွေက ပေါက်ကရတွေပါ ။ အိန္ဒိယလို နိုင်ငံမျိုးမှာ အဲဒီဆေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ အဲဒီအကြောင်းထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေသိကြပါတယ် ။ တက်လိုက်တဲ့ဈေးကလည်း ၅ ဆခန့်နီးပါး ။ အဲဒါက နာမည်ကြီးဆေးကုမ္မကြီးတစ်ခုအကြောင်း ။ နောက်ထပ်ရှိသေးတယ် ။ ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ Deal လုပ်တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဆီကို ဒီအကြောင်းတွေ ပြောပြချင်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီစာထဲမှာ ထည့်ရေးပါရစေဦး ။ တစ်လကို ဒီဆေး သုံးပေးရမယ် ဥပမာ ၂ မျိုး ၃ မျိုး ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးမယ် အဲဒီလို ပေါ်တင်ကြီးတွေ ( ဆရာဝန်မပီသစွာ ၊ဈေးကွက်ဆန်စွာ ) Deal လုပ်ကြတယ် ။ ပြီးတော့ ငါ ဘယ်နှစ်သိန်းဖိုးသုံးပေးမယ် ငါ့အိမ်ကို ၄၂ လက်မ တီဗွီကြီးပို့လိုက် ငါ့ဆေးခန်းကို ဘာလုပ်ပေးရမယ် အဲကွန်းတပ်ပေးရမယ်စသဖြင့် ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဆရာဝန်တွေတောင်ဆိုနေကြတာ တကယ်တော့ မယုံရဲပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် မယုံလို့လည်းမရပါဘူး အဲဒါတွေက အပြင်မှာ တကယ်ရှိနေခဲ့လို့ပါပဲ ။
ဆရာဝန်စိတ်ပီသစွာနဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀ကိုခုံမင်လို့ Ethic နဲ့ညီစွာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေအများစုဟာ အဲဒီလို အကျင့်စာရိတ္တချို့ယွင်းတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေလုပ်ရပ်ကြောင့်များစွာ ပဲ ထိခိုက်ခံစားနေရတယ် ။ ငါးခုံးမတွေကြောင့်လှေကြီးတစ်ခုလုံးပုပ်နေရပါတယ် ။ ဆေးကုမ္မဏီကြီးတွေက ဘယ်လောက်ပဲဈေးတင်တင် ဆရာဝန်ကြီးတွေက စမ်းသပ်ခ ဘယ်လောက်ပဲဈေးတင်တင် တကယ်ထိခိုက်နစ်နာတာက ကြားထဲကလူနာတွေပါပဲ ။ လူနာတွေက တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကအကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် မတတ်နိုင်တဲ့လူနာတွေအဖို့တော့ ရေနစ်ရာဝါးကူထိုးသလိုဖြစ်နေရပါတယ် ဆရာကြီးများခင်ဗျာ ။ ဆရာဝန်ကြီးတုိ့အချင်းချင်းလည်း ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်သလားမမှန်ဘူးလား ဘယ်လို ဆရာဝန်ကြီးတွေက ဒါတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ သိကြမှာပါ ။ နာမည်တွေကတော့ ကြီးလှပါတယ်ကျော်ကြားလှပါတယ် ဒါပေမယ့် ပျက်ယွင်းလာနေတဲ့ ကျွန်တော်တုိ့ဆေးလောကကြီးရဲ့ အဓိက တရားခံကတော့ အဲဒီလိုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ လောဘတက်နေတဲ့ဆေးကုမ္မဏီကြီးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် လက်ညှိုးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မလွန်ဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပဲအကျိုးအမြတ်ရရနောက်ဆုံးခံရတာ ပိုက်ဆံတွေကုန်သွားတာလူနာတွေပါ ။လူနာတွေဖက်ကလည်း လူသားချင်းစာနာစွာ ပြန်လည်ငဲ့ကွက်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ။ တချို့ကရှိသေးတယ် နိုင်ငံခြား Trip တွေပို့ပေးတာ ဒီဆေးကိုသုံးပေးပါ ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီး အကုန်စရိတ်ငြိမ်းမိသားစုအလိုက်ခေါ်သွားတာ ။ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေသွန်းနေကြတဲ့အထဲမှာ ဆရာကြီးတို့က ဘာကြောင့်များ နစ်မျော နေကြသလဲခင်ဗျာ ။
ရုန်းထွက်ရပါမယ် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ညီညာစွာ ရုန်းထွက်ရပါမယ် ။ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးဈေးကွက်ကို နိုင်ငံပေါင်းစုံက မျက်စိကြနေကြသလို ချယ်လှယ်လုပ်ကိုင်နေကြတာ စိတ်ပျက်စရာကြီးပါ ။ ကြော်ငြာတွေအမျိုးမျိုး နဲ့ ဆွယ်နေကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ခေတ်နဲ့စနစ်အခြေအနေအရ ( ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေတောင်လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်သောက်လို့ရတဲ့ခေတ်ကြီး ) ဆရာဝန်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်က အစ တည့်မှန်စွာ မှန်ကန်စွာ နေကြဖို့ပြုပြင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော် ထောက်ပြပါရစေ ။ Sponsor ဆိုတာကိုအပြိုင်အဆိုင်ယူနေကြတော့ ဆရာဝန်ကြီးတို့လည်းငြင်းရခက်မယ် ငွေနောက်လိုက်မိမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုသာဆက်သွားနေရင် လူနာတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ပိုပိုပျောက်လာရတဲ့အပြင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပိုပျက်ဆီးလာကြတဲ့ Ethic နဲ့မညီတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်လာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
ဆရာဝင်းမောင်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကနေ ဆက်တွေးမိတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲ ။ ထပ်ပြောပါရစေ ဒီစာလေးရေးဖြစ်အောင် ဆရာ့အသံလေးနားထောင်ဖြစ်အောင်လွှင့်ပေးတဲ့ Shwe FM နှင့်တကွ ဆရာဝင်းမောင်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုပြင်ကြဖို့လိုပါပြီ ။ မြန်မာပြည်ဆိုတာ လူနာတွေက ဆရာဝန်တွေကို တကယ့်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြတာပါ အရင့်အရင်တုန်းကပေါ့ ။ အခုတော့ လူနာတွေကသိပ်မယုံကြတော့ဘူး မကောင်းမြင်လာကြပြီ ဆရာဝန်ပေါက်စလေးတွေ စိတ်ထဲမှာ ငါတို့ဒီလိုင်းယူခဲ့တာ မှားများမှားနေပြီလားလို့အတွေးတွေတောင် ၀င်မိတဲ့အထိပါပဲ ။
ဒီစာကို အမုန်းခံပြီးရေးထားတာပါ ။
ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်
နေ့လည် ၃း၄၅ မိနစ်
Posted by သက်တန့်ချို at 8:53 PM 25 comments:
အခါအားလျှော်စွာ လွှတ်ချခဲ့တဲ့ တစုံတရာမှာ
ငါကလည်း ဘာကိုမှ ကြီးမြတ်တယ်လို့မထင်မိတဲ့ကောင်ပါ
ရှတတ အပြုံးတွေဘာလို့ ပျော်ဝင်နစ်မူးနေခဲ့ရသလဲ
၂၄ နာရီရဲ့ စက္ကန့်သံခြောက်ခြောက်ခြားခြားမှာပဲ
ဒီလိုပါပဲကွယ် . . . ရေရေရာရာဆိုတာ ဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး
အဆုံးလည်းမရှိ အစလည်းမရှိ အရာရာနတ္တိပေါ့ကွဲ့
အခုတော့ . . ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး
ခါးလိုက်တာ ညီမလေးရယ် . .
ငါက ပကတိအရှိတရားကိုမှ မြတ်နိုးတဲ့ကောင်ပါ
ဒီတစ်ရက်တော့ ခတ္တာတို့ကို ဝေပါ
ဖျော့တော့သော ရီဝေလင်းရှ ညနေခင်းအလွန်း
ရင်ဘတ်ထဲက လရိပ်ညိုကလေးက ဘယ်တော့မှမလင်းဘူး
အရာရာကပဲ ငါ့ကို ခဏခဏသတ်တယ်
ချိုမြမွှေးရှတဲ့ ရီဝေယစ်မှုးတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါ
အခုတော့ နေမ၀င်ခင် . . .
အိပ်မက်တွေ က ခဏခဏကြွေတယ်ကွယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:36 PM 1 comment:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:27 AM4comments:
ဒီညရဲ့အမှောင်က ခါတိုင်းညတွေထက်ပိုပြီးမှောင်နေသလိုပါပဲ ။ ကျုပ် ရင်တွေတအားခုန်နေတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ ကေသီဆိုတာ ကျုပ် အနှစ်နှစ်အကာလ ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်ဆိုပြီး ပိုးပန်းခဲ့ရတဲ့မိန်းမ ။ အဲဒီမိန်းမ က အခု ဒီနေ့ကျုပ်နဲ့ လက်ထပ်ပွဲကြီးပျော်ပျော် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့မိန်းမပေါ့ ။ လက်ထပ် ပွဲဆိုလို့ပြော ရဦးမယ် ။ ကေသီနဲ့ကျုပ်နဲ့တွဲလာခဲ့တာ ၈ နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ ။ သူလည်းပိုက်ဆံစု ကျုပ်လည်းပိုက်ဆံစု နဲ့ ကျုပ်တို့ အတော်အသင့်လေး စုမိပြီဆိုတော့မှ အိပ်ထောင်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ပြဿနာက စလာပါလေရောဗျ ။ မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲတယ်ဆိုတာ အနည်းဆုံးသိန်း ၂၀ လောက် ကုန် ကျတဲ့ကိစ္စ ။ ကျုပ်ကသိပ်သမျောတယ် ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး ဖက်ကကြည့်ရင် လည်းတစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ မင်္ဂလာ ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ခမ်းခမ်းနားနား ဆောင်ချင်မှာပေါ့လေ ( တကယ်ဆို တစ်ခါတည်းဆောင်တာအားမရရင် နောက်ထပ်ဆောင်ပေါ့ ) တွေးမိလိုက်တယ် ။ ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ထောင်ပြု ဆိုတဲ့ဝေါဟာရနောက်ခံက မင်္ဂလာပွဲ ၊ လက်မှတ်ထိုး ၊ ဘာညာ ဘာ ညာတွေပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ်လည်း သိပ်တော့နားမလည်ပါဘူး ။ ဒီနေရာမှာ လက်မှတ်ထိုးဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီး ကိုတော့ ကျုပ်တယ်ပြီး ဘ၀င်မကျလှဘူးဗျို့ ။ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့် လူယောက်ျား တစ်ဦးနဲ့လူ မိန်းမတစ်ဦး ချစ်ကြည်လူးပြီးဘ၀တစ်ခုကိုတူနှစ်ကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တကယ်ပဲ အဲဒီစာရွက်လေး ၂ ရွက်က အရေးကြီးသတဲ့လား ။ ကျုပ်တော့ မထင်ပေါင် ကျုပ်အဖေနဲ့အမေကို တလောက လက်ထပ် စာချုပ်မေးကြည့်တော့ရီတယ် ဘယ်ကလာငါ့သားရယ် အဖေတို့အမေတို့ ရှေ့ ၇ အိမ် နောက်၇ အိမ် ဖိတ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုပြီး နေခဲ့ကြတာပဲ ဒါမြန်မာ့ထုံးထမ်းအစဉ်အလာပဲ တဲ့ ။
ကျုပ်သာ အဲဒီလို ကေသီ့ကိုသွားပြောလို့ကတော့ ပါးတောင်အချခံရမယ် ။ ထားတော့ မင်္ဂလာဆောင် ခါနီးကျတော့ လည်း အိုဗျာ ရှုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်တွေ ဖိတ်စာ တွေ ဧည့်ရေးတွေ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေးတွေ တကယ့်ကို အလုပ်ရှုပ်တဲ့ပွဲကြီးပါတကား လို့တွေးမိလိုက်တယ် ။ တူနှစ်ကိုယ် အတူနေရဖို့အရေး လူသိ ရှင်ကြားဖိတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ ညဖက်ကျရင်အတူနေပါတော့မယ်ဆိုပြီး ဟိုလူ့ပြုံးဖြီးဖြီး လုပ်ဒီ လူ့ပြုံးဖြီးဖြီး လုပ်နဲ့ တယ် မသက်သာပါကလား ဟရို့ ။ ပြီးရင် လာလာချေသေး ကိုယ်တွေ ညဖက်အိပ်မယ့်ကုတင်ကြီးကို ဓါတ့်ပုံတွေတဖျပ်ဖျပ်ရိုက် အိုဗျာ ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူး ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင် ကတော့သိပ်ရှက်တာပဲ ။ အိပ်ခန်းထဲဝင်ခါနီး ကြိုးတားတယ်တဲ့ ဘာတဲ့ ပိုက်ဆံမုန့်ဖိုးတွေပေးရသေးတယ် ။ တကယ့်ကို ဗရုတ်သုတ်ခပွဲကြီးပါဗျာ ။ ပြီးတော့ လက်ဖွဲ့တွေကို သတို့သမီးဖက်က လုလိုက်သတို့ သားဖက်က လုလိုက်နဲ့ ကျုပ်တော့ ပထမဆုံး မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲ ပထမဆုံး လောကကြီးကို စိတ်ပျက် မိ သွားခြင်းပဲ ။ အော်ပြောရဦးမယ် မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး သတို့သားတိုင်း ငိုချင်သလို စိတ်ကြီးဖြစ် လာတယ် တဲ့ ။ ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကျုပ်ကတော့အဟုတ်ဗျို့ ။ မင်္ဂလာ ဆောင်ခါနီး ၂ ရက်လောက် အလိုက ကျုပ်သူငယ်ချင်းအိမ်သွားအိပ်တယ် ။
ထုံးစံအတိုင်းသောက်ကြစားကြပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ်လေ တစ်ခုခုကိုယ်မကျွမ်း ကျင် တဲ့နယ်ပယ်ထဲစုံပစ်ဝင်လိုက် ရ မှာ ၀န်လေးနေမိသလို ကျုပ်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ဥပမာ ဘောပွဲကြည့်တာတို့ ကာရာအိုကေသွားတာတို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာတို့ပေါ့ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားမယ် သိပ်ကြောက်တယ် ။ အဲဒီလိုတွေးရင်းကျုပ် အဲဒီသူငယ်ချင်းအိမ်မှာ တကယ်မျက်ရည်ကျလာတယ်ဗျို့ ။ ကျုပ်ဘယ်လောက် ထိတောင်စဉ်းစားသလဲသိလား ထွက်ပြေးဖို့အထိတောင် စဉ်းစားမိလိုက်သေးတးယ်။ ဒါဆို ကေသီ့ကိုမ ချစ်ဘူးလာလိုမေးစရာရှိတယ် ။ ချစ်တာပေါ့ဗျာ ကျုပ်ဘ၀မှာ အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်လွဲလို့ ဘယ်သူ့ကို မှရင်မခုန်သလို သူနဲ့လည်းမခွဲနိုင်ဘူး ။ ဒါပေမယ့်ချစ်တာကချစ်တာပဲဗျ အဲဒီအချစ်တွေက အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ပျောက်ပျက်ထွက်ကုန်မှာလည်းကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်က စိုးရိမ်နေမိသေးတယ် ။ ကေသီ ကတော့ ထုံးအတိုင်းပါပဲဗျာ ဆူဆူပူပူနဲ့အိမ်ထောင်မကျခင်ကတည်းက ဟိုအကွက်ချ ဒီအကွက်ချနဲ့ နားကိုညီးနေပါရော ။ ခင်းဗျားတို့နဲ့မသိတဲ့ လူတွေကို မင်္ဂလာဆောင်မှာ လိုက်လိုက်ပြုံးပြနေရတာ အတော့်ကို ကိုးလိုးကန့်လန့် နိုင်တယ်လို့များ ခင်ဗျားတို့မထင်မိဘူးလား။ ကျုပ်ကတော့ စိတ်ကိုပျက်ရော ။ နောက် လောလောလတ်လတ်ကျုပ်အကိုတွေလင်မယားက သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အခုတော့ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်ပါသဖြင့် ဘာညာနဲ့သတင်းစာတွေထဲ မပတ် သတ်တော့ကြောင်း ကြော်ငြာတွေ ထည့်ကွဲကြပြဲကြ ကုန်ဆိုတော့ကား ကျုပ်ဝန်လေးနေမိတာ အပြစ်တော့မဆို သာဘူးမဟုတ်လား ။
တကယ်ဆို လူနှစ်ယောက်လက်ထပ်တယ်ဆိုတာသိပ်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျ ။ တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက်သိဖို့ဆိုတာ ဘယ်နှစ်နှစ်တွဲတွဲ သိဖို့က မလွယ်သေးဘူး ။ ချစ်လှပါတယ် ဆိုပြီးအနှစ်ငါးဆယ်လောက်ပေါင်းနေတဲ့လင်မယားတွေတောင် တချိန်မှာ လှို့ဝှက်အကြောင်းတွေဘွားက နဲပေါ်ပြီး ကွဲကြပြဲကြတာတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်လား ။တကယ်တော့ လင်မယားဆိုတာ အရင် ဆုံးပေါင်းကြည့် ရမယ် ဟုတ်တယ် ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ခင်ဗျားတို့က နှမသားချင်းမစာနာဘူးပြောဦးမယ် ။ကျုပ်တော့တခါတလေ နိုင်ငံခြားက အယူအဆတွေသိပ်ကြိုက်တယ် ဘာတဲ့ Living together ဆိုတာလေ ။ သူတို့တွေက အတူနေလိုက်ကြတယ် တကယ့်လင်မယားတွေလို လက်မထပ်ရသေးခင်ကြားထဲ စိတ်သဘော ထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်လမ်းခွဲပြီးနောက်တစ်ယောက်ရှာယုံပဲ ။ လိုအပ်ရင်ကလေးတွေ ဘာတွေမွေး လိုက်သေးတယ် ။တစ်ယောက်စိတ်ထား ကိုတစ်ယောက်သိကြပြီ ဆိုတော့မှ လက် ထပ်ကြ တယ် ။ ဒီတော့အဲဒီလို စုံတွဲတွေက ကွဲတာရှားတယ်မဟုတ်လား ။ ဒီမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပေါင် အခုကြိုက်အခုယူ ပြီးရင်အခုကွဲ ပိုတောင်ဆိုးနေသလိုပါပဲမဟုတ်လား ။ ထားပါတော့ဗျာ ကျုပ်လည်း သိပ်တော့မထူးပါဘူး ကေသီ့ကို ချစ်လွန်းလို့ အချိန်လည်းတန်နေပြီဆိုတော့ လက်ထပ်ယူခဲ့ တယ် ပျော် သလိုလိုပါပဲ တကယ်ပျော်လားမပျော်ဘူးလားတော့ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်မသိနိုင်ဘူးပေါ့လေ ။
ကေသီကတော့ပျော်တယ်ထင်ပါတယ် ။ ကျုပ်နံရံက နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ် ၁၁ နာရီခွဲ ။ ဒီစာကြည့်ခန်း ထဲမှာ ကျုပ်ထိုင်နေတာ အတော်ကြာပြီ ။ ကေသီလည်းအခန်းထဲမှာ ကျုပ် ကိုစောင့်နေလောက်ပြီ။ ထုံးစံအတိုင်းမင်္ဂလာဦးညပေါ့ဗျာ ။ ခက်တာက ကျုပ် အဲဒီမင်္ဂလာဦးအခန်းထဲ မ၀င်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ဘာလို့လည်းကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်မသိဘူး ။ အထဲဝင်ပြီး သတို့သမီးကို နမ်းမယ် ပြီး ရင် အတူနေမယ် အာဗျာ တကယ့်ကို ပျင်းစရာအလုပ်ကြီးပဲ ကျုပ်လိင်စိတ်သား စိတ်ကုန်နေ တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် . .ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ ကျုပ် ရဲ့ ပထမဆုံးညကြီးကို ဒီလို ပေါတောတော မကုန်ဆုံးချင်သလို ကျုပ် ..မပြောတတ်တော့ပါဘူး ။ ဘယ်သူကများ မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သမီးနဲ့အတူနေရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသလဲမသိပါဘူး ။ တကယ်ဆိုဒီနေ့က ကျုပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ရှိတယ်ဗျ ။ ကျုပ် သိပ်ကြည့်ချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် မင်္ဂလာဦးညဆိုတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ ပွဲကလည်း ၁ နာရီကျော်မှလာမှာ အဲဒီမှာတင်ကျုပ်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခု ကဆုံးရှုံးသွားရပြန်ပြီ။ မထူးပါဘူးလေ ကျုပ်စိတ်ဒုံးဒုံးချပြီး အခန်းထဲဝင်လာခဲ့တယ် ။
ကေသီ ဟိုဖက်လှည့်ပြီး လှဲနေတယ်ကုတင်ပေါ်မှာ ။ သူအိပ်မပျော်မှန်းကျုပ်သိတာပေါ့ ။အခန်းထဲကနာရီ စက်သံက တချောက်ချောက် အခန်းမီးကပြာလဲ့လဲ့ တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာပါပဲ ။ကျုပ်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ် ကေသီ့ကိုမဟုတ်ဘူးဗျို့ ဒီအခြေအနေကြီးကို အာဗျာ ဇာခြင်ထောင်အ ထဲက ကေသီ့ကိုယ် လုံးလေးကိုပဲ တိုးဖက်ပြီးအိပ်လိုက်ရမလား ကျုပ်စိတ်တွေတအား ညစ်လာပြီ ကျုပ်ဒီအခန်းထဲမ ၀င်ချင်ဘူး ဒါပြီးရင်ကျုပ်ဘ၀ကသွားပြီလေ အိမ်ထောင်သည်ကြီးဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ။ ကေသီ့ကိုယ်လေးတစ်ချက်လှုပ်သွားတယ် ။ ကျုပ်အသက်တောင်မရှုရဲဘူး ။ ဟုတ်တယ်လေ ကျုပ်ရောက်နေမှန်းသိရင် . . . . ။
ကျုပ် ခြေသံကို ဖွပြီး အခန်းအပြင်ကို ပြန်ထွက်ခဲ့တယ် ။ ၁၂ နာရီထိုးဖို့ ၁၅ မိနစ်ပဲလိုတော့တယ် ။ ကျုပ် ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ နံရံကပ်ဘီဒိုအပေါ်က ပုလင်းပြားလေးယူပြီး ခွက်ထဲ ထည့်လို့ သောက်ချ လိုက်တယ် ။ အား...ပူလိုက်တာ . . . .စိတ်တွေလည်းညစ်လိုက်တာ.....။ အချိန်တွေကြာလေလေ သတို့သမီးကိုအားနာလာလေလေပဲ ။ ကျုပ်လေ အခု ဒီအိမ်ထဲကနေ ၀ုန်းကနဲ ခုန်ဆင်းပြီးပြေးထွက်သွားချင်လိုက်တော့တယ် ။ စိတ်ကို ပြန်တင်းပြီး လူကလည်းရီဝေေ၀ဖြစ်လာတယ် ။ အခန်းတံခါးကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ် ။ ကေသီ အိပ်နေတာလား မအိပ်နေတာလား ကျုပ်မသိတော့ ဘူး ။ ကျုပ် မျက်နှာကို အံ့အားတကြီးလက်နဲ့ သုတ်လိုက်တော့ ဟင်..မျက်ရည်တွေပါလား ။ ငါဘာလို့ငိုနေမိပါလိမ့် ။
ကျုပ်ဘာကိုမှ မတွေးချင်တော့ဘူးဗျာ . . .နံရံပေါ်က အိပ်ခန်းမီးကို ကျုပ် ချောက်ကနဲ ပိတ်ချလိုက်ပါတော့ တယ် ။ အဲဒါဟာ ဘ၀တစ်ခုစတာလား ဘ၀တစ်ခုဆုံသွားတာလား စည်းတစ်ခုရဲ့ နယ်လွန် ကိုရောက်သွား တာလား ကျုပ်မတွေးတတ်တော့ပါဘူး ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:07 AM 12 comments:
ကျွန်တော့်ဆီကို ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့ ဒုတိယနှစ်ကျောင်း သူတစ်ယောက်အောက် ပါအတိုင်းစာ ပို့ထားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်းတချိန်က အဲဒီလိုခံစားခဲ့ရဖူး လို့ကိုယ်ချင်းစာ တဲ့အတွက် စာပြန်ပေး လိုက်ပါတယ် ။
Dear sir, can i ask u some advice for i am so disappointed n depressed this medical student life?i wanna know how can i pass it.there r too much to study but we havealittle time..whole day is full of lecture , tuotorial ,pratical n tution...when i return home im so tired n fell asleep n morning again n so day after day i get no lesson..n then i wanna give up..i have no courage to continue ...so plz give me some advice to pass it for u also radoctor.. n i hope u understand me. plz reply me sir i will
be waiting for ...don't
ignore me sir ....i've never writte
sorry sir i ve never written it before so forgive me when i was something wrong
Thanksalot to u sir
imasecond mb student im not too much inteligent when i know my fri can do n more get lesson than me i fell more upset by myself besides im too weak n health is not wealth always ill...so compare with others i ever late in study ...i admire ur letters n admire u so i request u to give advice me...Thanks sir
ညီမရေ . . မှန်တာပေါ့ ဆေးကျောင်းသူ ဆေးကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာ သူများတွေထင်ထားသလို ပန်းခင်းလမ်း မဟုတ်သလို ပျော်စရာ ရွှင်စရာ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ကန်ဘောင် မှာ လေညှင်းလေးတွေခံပြီး တီတီတာတာ နဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ အနှစ်သာရ ဆိုလား အဲဒါတွေခံစားနေ ရတဲ့အထဲ မှာ ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုတော့မပါဘူးညီမရေ ။ ညီမအခုဖြစ်နေ တဲ့ခံစားချက်တွေ က ဆေးကျောင်း သူ ဆေးကျောင်းသားတော်တော်များများမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ depression တစ်မျိုးပါပဲ ။
“ ငါ အောင်ပါ့မလား ”
“ ငါ သူများတွေ လို ဘာလို့ စာမကျက်နိုင်တော့တာလဲ ”
“ ငါရွေးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်က မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှ ဟုတ်ရဲ့လား ” စသဖြင့်ပေါ့ ။ တချို့ကတော့ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဆေးကျောင်းက ထွက်လို့ တခြား လိုင်းတွေကူးသွားတာလည်းရှိပါတယ် ။ လူအများစုထင်နေကြတာက ဆေးကျောင်းတက်ရင် ဆရာဝန်ဖြစ်မယ်တဲ့ ။ အဲဒီ စကားမှားကြောင်း ကို ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေရော ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးသားလူတွေရော သိပါလိမ့်မယ် ။ တစ်နှစ်တစ် တန်းတောင်အောင်အောင်မနည်းကြိုးစားပြီး ဆပ်ပလီမထိအောင် ရုန်းကန် လို့ နောက် ဆက်တွဲ မတက် ချင်လို့ အသေအလဲ လုပ်ကြရတာ ဆေးကျောင်းသားဘ၀တွေပါ ။
ဒီနေရာမှာ “ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်စိတ် ” ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ် ။ ဆေးကျောင်း တက်တဲ့ သူတော်တော်များများမှာ တချို့ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိကြပေမယ့် တချို့ကတော့ ဆရာဝန်ဖြစ် ချင်စိတ်လုံးဝမရှိကြဘူး ။ တချို့ကတော့ ဖြစ်ချင်သလား မဖြစ်ချင်သလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိတဲ့လူတွေ လည်းရှိတယ် ။ အဲဒီလိုလူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ပေါ့ ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်စိတ်ဟာ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပေါ် လာတာ တကယ်တော့ House surgeon ဆင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ ။ လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှ လူနာတွေကို စာနာလာတယ် သနားလာတယ် နားလည်လာတယ် လူ့အသက် ကယ် ရတဲ့ပီတိ ကို သိလာတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာဝန် စစ်စစ် ဖြစ်ချင် စိတ် ဟာ ပေါ်ထွက်လာကြစမြဲပါပဲ ။
ညီမရေ . . . ဆယ်တုန်းတုန်းကကြိုးစားခဲ့လို့ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ အရည်အချင်းမှီပါတယ်ဆိုပြီး ခွင့်ပြုလို့ ကိုယ်တောင် တက်နေရပြီပဲ ။ သူများလုပ်နိုင်ရင်ကိုယ်လဲလုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ ။ သူများကျက်နိုင်ရင် ကိုယ်လဲ ကျက်နိုင် ရမှာပေါ့ ။ ဆေးကျောင်းကစာတွေက အများကြီးဆိုတာ မှန်ပါတယ် ။ ကျောင်းစာတွေ ချည်းဖိကျက်နေလို့ချည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး ။ ကျွန်တော်ကတော့ စကားလေးတစ်ခု ပဲ လက်ဆောင်ပေး ချင်ပါတယ် ။ ဆေးကျောင်းအောင်ဖို့က သိပ်တော့မခက်လှဘူး ဒါပေမယ့်ဆေးစာတွေကို ပိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကတော့ ခက်လှတယ် ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ Parmaco (ဆေးဝါးဗေဒ ) မပိုင်တဲ့သူတွေ Patho (ရောဂါဗေဒ ) မပိုင်တဲ့သူတွေ တပုံကြီးပါပဲ ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့
“ အမြဲတမ်း မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်နေပါ ” ဆိုတာပါပဲ ။ ဘယ်တော့မှ အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းပြီးစာမကျက်ရဘူး ဆရာမတွေ ဆရာတွေနဲ့ရင်းနှီးစွာနေရမယ် ။ နှစ်စကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာတွေကို မှန်မှန်ဖတ်သွားရမယ် ။ ကျက်စရာ မလိုဘူးနော် ဒီလောက်များတဲ့စာတွေကို အပိုင် ဆယ်တုန်းကလို ကျက်နေရရင်သေရချည်ရဲ့ ။ ဖတ်ပါ အကြိမ်အရေအတွက်များများ ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ own english နဲ့ပဲပြန်ရေးရမယ်မဟုတ်လား ။ အဓိကကတော့ note လေးတွေထုတ်ပြီးကျက်တဲ့အလေ့အကျင့်မွေးပါ ။ ဒီခေါင်းစဉ်လာရင် ဒီ နုတ်လေးကို ပုံဖော်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပုဒ်လုံးထွက်ကျလာသလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ် ။
စာမေးပွဲအောင်ဖို့ဆိုတာ စာ + လက်တွေ့ ၂ ခုပေါင်းမှ ရမယ် ဆိုတာ ညီမလည်းသိမှာပါ ။ လက်တွေ့ဟာ မခက်ခဲဘူး အမှတ်ကို များအောင်လုပ်ရမယ် ။ စာကတော့ သူမသာ ကိုယ်မသာပါပဲ ဘာမှသိပ်မထူးဘူး ။ နောက်တစ်ခုက မေးခွန်းဟောင်းတွေ ဘယ်ကျောင်းက ဖိုင်နယ်မေး ခွန်းထုတ် မှာလဲလေ့ လာ မေးခွန်းဟောင်းတွေ စာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ထွက်လာတတ်တယ် စုံစမ်းပြီး ၀ယ်ထား လေ့လာ ။
အစအဆုံး အလွတ်ကျက်နေလို့ကတော့ရူးရင်ရူးမရူးရင်လည်း ဆေးကျောင်းထွက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားမှာပေါ့ ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ရတာ အတိုက်အခံများတယ် အကျိုးမရှိဘူး မချမ်းသာဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ညီမအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်ဖူးသွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါခံစားနေ ရတဲ့လူ တစ်ယောက်ကို ဝေဒနာလျော့ပါးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါ ညီမဆရာ ၀န်ဖြစ် ချင်စိတ်နဲ့ ဇွဲသတ္တိတွေက ပီပီပြင်ပြင်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀က်ဖြစ်မှ တော့ မစင်မကြောက်နဲ့လို့ ကျွန်တော် ခဏခဏ အားပေးဖူးတယ် ။ ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်ရော သူငယ်ချင်းတွေရော စာမေးပွဲရာသီဟာ စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်အများဆုံးပဲ ။ ပျော်ပျော်နေပါ အရမ်းကြီးစိတ်ဖိစီးမှုမထားနဲ့ ။
- ငါ ဆရာဝန်စစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်
- ဆေးစာတွေကို စာမေးပွဲအောင်ယုံမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့မှာ အသုံးချဖို့အတွက် အခုကတည်း က သေချာကျက်ရမယ်
- ဒီအလုပ်နဲ့ငါ မချမ်းသာဘူး ဒါပေမယ့် ရလာတဲ့ပီတိက ဘာနဲ့မှ အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူး
- ကိုယ့်မိဘတွေရဲ့ငွေကြေးတွေ ကိုယ့် အချိန်တွေ အလဟဿမဖြစ်စေရဘူး
- ဆေးကျောင်းသူဆေးကျောင်းသားကြီးတွေဆိုပြီးငါ့မှာ ဘ၀င်မြင့်ဖို့ အချိန်ဖြုန်းဖို့အချိန်မရှိဘူး ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ငါတစ်နှစ်တစ်တန်း မှန်မှန်အောင်ချင်တယ်
- ပန်းတိုင်ပြေးလမ်းပေါ်ငါတက်ခဲ့ပြီးပြီ ဆက်ပြေးရတော့မှာပဲ စတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးမြူထားပါညီမရေ ။
“ အောင်မြင်ပါစေ ဆရာဝန်စစ်စစ်ဖြစ်လို့ လူသားကောင်းကျိုးကိုသယ်ပိုးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေ ”
Posted by သက်တန့်ချို at 10:00 AM4comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:46 AM7comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 5:35 PM4comments: